Global Voices teny Malagasy » Any Jordania, Mahazo vola Be Foana Ireo Mpandraikiraiky · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Mey 2017 15:42 GMT 1	 · Mpanoratra Maggie Nazer Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Arimalala
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Jordania, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Amman Jordania. Sary Alice Bonifatti, nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Ny fianarana momba ny demony Silamo dia ao amin'ny “jiny” (الجن‎‎), niavian'ny teny frantsay hoe “Génie”, ilay avelo mpanompon'i Allah mitovy laharana amin'ny olombelona. Ny tena mahavariana amin'ny finoana sy ny fandraikirekena any Jordania, dia ny fifandraisana mifanohitra amin'ny fanoherana sy fandeferana misy amin'ny fivavahana sy ny “asan'ny maizina”. Zavatra iray no azo antoka: ny finoana silamo dia tsy mandà ny fisian'ny herin'ny maizina, ny mifanohitra amin'izany aza: misy andininy maromaro ao amin'ny Korano  mifandray amin'ny fandraikirekena (mazia), na dia ho fanamelohana ilay fomba fanao fotsiny aza.
Raha nanontanian'ny Global Voices raha nino ny herin'ny mazia izy, dia nilaza ny mpamily fiarakaretsaka nitondra an'i Amman Ibrahim Othman fa “ny silamo rehetra dia tokony hino ny mazia noho ny tantaran'i Mpaminany Moussa ao amin'ny Korano.” Araka ny Sourate 7 ao amin'ny Rindrin'ny A'raf  ao amin'ny Korano, fony nampanantsoina teo anatrehan'ny Faraona i Moizy, dia nifanatrika tamin'ny ombiasiny, izay nampiasa ody mba hanova ireo tehiny ho lasa bibilava. Noho ny fankatoavan'Andriamanitra, novàn'i Moizy ho bibilava koa ny tehiny, ka nitelina ireo bibilavan'ireo ombiasy. Ary nitsaoka azy (Moizy) izy ireo, ka nanaiky ny faminaniany, raiki-tahotra noho ilay fahagagàna.
Manazava ny maha samy hafa ny ody sy ny fahagagana araka ny korano ilay tantara, izay araka ny tenin'i Ibn Khaldoun , iray amin'ireo miozolmàna lehibe indrindra mpahay tantara, “Ny fahagagana dia herin'Andriamanitra izay manainga ao amin'ny fanahy [ny fahafahana] maneho hery. Tohanan'ny Fanahin'Andriamanitra amin'ny asany ireo [mpanao fahagagana]. Ny mpandraikiraiky kosa, miasa irery ary ny hany manampy azy dia ny herin'ny sainy ihany, ary, amin'ny toe-javatra sasany, miaraka amin'ny fanohanan'ny demony.”
Any Jordania, tafiditra ao anatin'ireo finoana mahagaga miely sy mbola malaza ny fanekena ny fisian'ny “jiny” sy ny finoana ny fahafahan'izy ireo manindry olona, toy ilay “maso ratsy ” tsy mety afa-po, ireo ody atao fiaro ary ny Al-matuom  — ny fampiasàna ny ràn'ny fadimbolana izay heverina ho “tsy madio” mba hakàna toky ny fitiavan'ny olona iray.
Amin'ny fomba fijery ara-pivavahana, heverina ho ratsy ny ody, izay no hany azo ambara. Fintinin'i Hashem Ali Osman, Imam ao Al-Masjed Al-Edlbe any Na’ur, ny fahitan'ny fivavahana ny momba ny mazia ary hazavainy fa “asan'i Sheitan (ny demony) ny ody ary ny fampianarana, ny fianarana ary ny fanaovana mazia dia haram (fahotàna).”
Na izany aza, na dia voaràra tanteraka aza ny mazia, ao amin'ny asany mifaninana amin'ny Sheikh-n'ny maoske, voaantso fara-fahakeliny indroa isan-kerinandro i Ali Osman mba handroaka fanahy ratsy. Noho i Al-Masjed heverina ho toy ny fonenan'Andriamanitra manana ny hery ambony indrindra amin'ireo zavaboahary, ezahan'ireo olona itoeran'ny “jiny” atao izay tsy hidirana any amin'ny maoske. Ny sheikh araka izany no mitsidika azy ireny any an-tranony.
Mahakasika vehivavy 22 taona “izay manana hatsaran-tarehy miavaka” ny tranga farany notaterin'ny Sheikh Ali Osman tamin'ny Global Voices:
Lehilahy teo amin'ny efapolo no efa nangataka azy ho vady fa rava tsirairay ny fifamofoana alohan'ny hanaovana azy ho ofisialy. Tao anatin'ny famoizampo, niantso ahy ho any an-tranony ny fianakaviany mba hamaky ny andininy ao amin'ny Korano, ny fomba tsara indrindra voalaza fa mandroaka ny fanahy ratsy. Nanomboka niresaka tamin'ny ‘jiny’ izay nipetraka tamin'ilay vehivavy aho araka izany, ary nahalala fa nanam-pitiavana azy ilay zavaboahary mahagaga. Araka izany, isak'izay misy olona mikasa haka azy ho vady, ovainn'ilay avelo mandritra ny fotoana fohy ny tarehiny. Rehefa mahita ilay endriny “mampitahotra” tampoka ireo nikasa haka azy ho vady dia nitsoaka tsy nisy fanazavana. Fa vao tapitra ny famakiako ny Korano, nivoaka ny vatan'ilay vehivavy ny jiny ary fotoana fohy taorian'izay dia nanambady izy.
Raha miray feo ireo mpitondra fivavahana manamafy fa fahotana mahafaty ny mamosavy olona, asa mampidi-bola be izay tsy vitsy mpanontany ny maha-sheikh al-sihr (manampahaizana manokana amin'ny resaka mazia). Ny fanaovana fikarohana tsotra amin'ny Google dia manome pejy maro miaraka amin'ny vokany, misy ny fanoroana ireo mpandraikiraiky mipetraka ao Ammam izay manome toky fa “manapaka ny vintan-dratsy”, “manjera ozona”, na izy roa indray miaraka.
Pikantsarin'ireo ampahan'ny vokatry ny fikarohana tao amin'ny Google ho an'ny “mpanao fanafody majika any Amman, Jordania”.
Nihaona tamin'olona iray izay manolotra ny fitsaboana amin'ny alalan'ny ody ny Global Voices, ary nahafantatra fa miovaova arakaraka ny “sokajiny” ny vidin'ny famafazana ozona, ary mety hahatratra 200 hatramin'ny 100.000 denaria jordaniana (misanda 256 euros ilay voalohany ary 128.200 euros ilay faharoa).
Fanambinana ara-toekarena, fanambadiana ary ozona ataon'ny hafa no matetika antony lehibe anatonana mpanao ody na mpimasy. Sorona amin'ny biby, famosaviana ny zavatr'ilay olona kendrena, ary fanamboarana “kitapo” misy sarisary mifono zava-miafina ho apetraka eny amin'ny fasana no sasany amin'ny fomba ampiasain'ireo mpimasy rehefa manao ny asany izy ireo.
Mahagaga, raha oharina amin'ny firenena sasany izay silamo no ampahany betsaka, tsy manana lalàna mandràra ny fandraikirekena i Jordania. Manazava ny Sheikh Ali Osman:
Raha ara-teknika mety mandoa sazy noho ny fanaovana asan'ny mpimasy ny olona any Jordania, zara raha misy ireny tranga ireny, satria raha misy olona mitory noho ny resaka mazia, dia voasaringotra ao anatiny koa izy.
Raha miely eran'i Jordania ny finoana ny mazia, tsy manakana ny olona tsy hihataka amin'ny karazam-pisainana tahaka ireny akory izany. Sammy Abdelrahim, tovolahy Jordaniana mpianatra ao amin'ny Kolejy Middlebury [any Etazonia], dia milaza fa tsy mino ny mazia satria ny “fivavahany no hiaro [azy]”, nefa i Lubna Mohammad, tovovavy mpianatra ao amin'ny anjerimanontolon'i Jordania manazava amin'ny Global Voices hoe raha finoana na tsia ny mazia no resahana, misy fahasamihafàna be isaky ny andian-taranaka:
Niezaka nanamarina ny zavatra hafahafa mitranga ny olona tany aloha, amin'ny filazana hoe ny mazia no nahatonga azy ireny, satria tsy nanana fanazavana amin'izany izy ireo. Mety amin'ny renibeko ny mazia, ho ahy, ny siansa no mety amiko.
Na iadiana hevitra aza, manana ny toerany lehibe eo amin'ireo vondrom-piarahamonina maro any Jordania ny finoana ny mazia. Mampitandrina i Belal Mustafa, mpitsabo aretin-tsaina sady mpandalina ny fitondrantena ao amin'ny Médecins Sans Frontières any Jordania, fa mety hisy fiantraikany azo tsapain-tànana amin'ny hitadiavan'ny olona iray fanampiana ara-tsaina raha ilaina ny finoana ny mazia:
Raha ara-pivavahana, toy ny ho an'ny ankamaroan'ny olona, dia marina ireny finoana ireny. Satria, azo lazaina fa ‘tsy hita amin'ny fandinihana” ireo olana ara-tsaina, heverina ho misy ifandraisany amin'ny finoana ara-panahy izy ireny .
Ho azy, mety ho sarotra ny hanazava fa afaka miara-dalana ny fivavahana sy ny fitsaboana:
Maro no mino fa ny olan'ny fahasalamana ara-tsaina dia avy amin'ny tsy fisian'ny finoana ao amin'ny olona iray. Ny olana izay atrehin'ny mpitsabo aretin-tsaina dia ny fironana izay iainan'ny olona mikorontana ara-tsaina ary manilika ny fandikàna ireo herin'ny mazia sy ny fahasahiranana ara-tsaina ary ara-pitondrantena sy mandà ny fizahàna na fitsaboana ara-tsaina.
Ho an'ny dokotera Mustafa, ny fandresen-dahatra no fanalahidy:
Ny asanay mpitsabo saina dia tsy ny hanova ny toetsain'ny marary, fa ny hanampy azy ireo hiaina tsaratsara kokoa. Ny andraikitray dia ny hampahalala ny olona ny mikasika ny fahasalamana ara-tsaina — indrindra rehefa misy mitovy aminà fikorontanana ara-tsaina toy ny aretin-tsaina na tahotra be ireo soritr'aretina momba ny fieritreretana mazia.
Noho izany, inona no azo tazonina momba ny finoana ny mazia sy ny toeran'izy ireny eo amin'ny fiarahamonina? Mametraka azy ireny ho eo anelanelan'ny fivavahana, finoanoam-poana ary ny fanirian'ny olombelona hamaritra sy hifehy ny tsy fantany ny hasarotry ny finoana ny mazia. Mampirisika antsika hiverina hieritreritra ny tombatombantsika momba ny mazia i Tayseer Abu Odeh, manampahaizana amin'ny Literatiora ampitahaina ao amin'ny Indiana University ao Pennsylvania.
Ny fotokevitry ny mazia ao amin'ny tontolo silamo dia olana sarotra izay mitondra ho amin'ny fanilihana ara-kolontsaina. Adika tsotra ho manahirana, maroloko, tsy hay faritana ary saro-pantarina ny mazia. Ny iray amin'ny fototry ny olana mitranga dia avy amin'ny fifanoherana lalimpàka eo amin'ny tantara nofinofy avy any Atsinanana, nitarina araka ny filozofian'olombelona sy araka ny fisiana any anatinà lahateny tatsinanana, ary ny ohatra ara-pitenenana siantifikan'ny Tatsinanana, ampidirina miaraka amin'ny sarisarin'ny fahambonian'ny lahateny momba ny finoana tanteraka ny fahamarinana sy ny fivoarana avy any Eoropa miala amin'ny mahazatra. Raha fintinina, ny fijerena ny mazia amin'ny alalan'ny solomason'ny ‘fomba fisainana’ sady mitompo teny fantatra no manonofinofy toy ity dia mamitaka ny fitantarana momba ny tontolo kelin'ny mazia. Mampihena azy ho amin'ny endriky ny fisaina Silamo sy tatsinanana notsotsorina, na aminà endrika rafitra metafizika izany.
Nefa moa ve ho afaka handositra ny fomba amam-panao tatsinanana rehefa manadihady ny fandikàna ara-parahamonina, ara-kolontsaina ary ara-tsaina ny mazia any Afovoany-Atsinanana ? Ho an'i Abu Odeh, ny fijerena ny fanaovana mazia ho toy ny toe-javatra ara-kolontsaina sy araka ny maha-olona dia “manala sy manimba ny hevitra mifanohitra efa nipetrak ary ireo angano ara-pivavahana amin'ny antsasany izay mampietry ny mazia ho amin'ny sokajy tokan'ny fanaikena ho resy sy toetra nolovàna ara-kolontsaina.
Ao anatin'izay làlana izay ihany, i Michael Muhammad Knight, silamo mpanoratra, miaro fa ny fikarohana momba ny finoana ny mazia dia ilaina mba hahatakarana ny hasarotry ny ao Afovoany Atsinanana:
Raha jerena amin'izay azo antsoina ankehitriny ho mazia, na raha arahina amin'ny fomba amam-panao silamo, amin'ny toe-javatra maro, toa mety azo itarina amin'ny trangan-javatra maro izay azo eritreretina ho “silamo” izany.
Ho azy, dia vokatra iray tsara ara-tsosialy izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/06/99462/
 andininy maromaro ao amin'ny Korano: http://www.islamawareness.net/BlackMagic/magic.html
 Sourate 7 ao amin'ny Rindrin'ny A'raf: http://www.clearquran.com/007.html
 araka ny tenin'i Ibn Khaldoun: http://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/magic-magic-islam
 maso ratsy: https://www.greenprophet.com/2012/09/middle-east-evil-eye/